Fundisa abafundi bakho | Martech Zone
NgeCawa, uDisemba 10, 2006 Lwesine, Okthobha 23, 2014 Douglas Karr
Sonke saqala kwindawo ethile!
Bendithetha nomhlobo wam ngokuhlwanje ngeeNethiwekhi zeNtlalo kunye nekamva lam kwiShishini. Ndibe nesidlo sasemini esimnandi, esikhuthazayo kunye nomhlobo olungileyo, uPat Coyle, kwiveki ephelileyo. Ndisoloko ndingumchwephesha wezobuchwephesha… ujack wabo bonke ubuchwephesha, inkosi yezinye… kude kube ngoku. Kunyaka ophelileyo ndiye ndajonga ingqalelo kwindalo ye-Intanethi.
Imigca yencoko, ukukhutshwa kweendaba, ukuthengisa, iindaba kunye nencoko ziphazamisekile ngokupheleleyo. Imigca yetekhnoloji nayo, kunye XML, uShishino, kubloga kwaye seo. Isantya esihamba ngaso sinomdla. Akukho ziko lemfundo ephakamileyo elinokwakha ikhosi. Ngokukhawuleza njengokuba uyila ikharityhulam, iya kuphelelwa lixesha. Eso sesinye sezizathu zokuba abantu abafana nam bejikeleze ubuchwephesha beteknoloji kubaluleke kakhulu.
Umxholo webhlog yam uyahluka phakathi komqali kunye nokuqhubela phambili ngenjongo. Ndiyazinyanzela ukuba ndifundise, ndenze uvavanyo, kwaye ndivavanye onke amaqonga obuchwephesha kunye neetekhnoloji ukuze ndibesendaweni yokuthenjwa kunye nobuchule phakathi koontanga bam. Ukuza kuthi ga ngoku, kulungile… Ndifumana loo nto!
Ngendingazange ndiyifunde ukuba ayengekho kuyo yonke eminye imithombo ekwabelwana ngayo ngamava abo kwi-intanethi. Yisizathu sokuba ndihlala ndiyibuyisela inotshi kwaye ndinike umbono womqali. Umntu othile uthathe ixesha lam kwaye ndifuna ukubuyisa ubabalo! Ukufunda ngale nto kungoyikisa, ndifuna ukukhuthaza abantu, ndingabinantloni kwaye ndibayeke. Abanye benu banokufunda amanye amangeniso am kwaye bathi, "Hayi duh!". Kulungile… vele unamathele kum kwaye siza kubuyela kwinqanaba lakho ngaphandle kwexesha.
Inqaku lokwenyani lebhlog yam. Ndingathanda ukwenza ngaphezulu kokuphinda ndibuyelene namakhonkco kunye neendaba- ndifuna ukuthetha ngesimo esiza kufundisa abanye ukuze bakwazi ukwenza izigqibo. Kuwo onke amakhulukhulu ezondli endizifundileyo, zimbalwa kakhulu eziluncedo kumsebenzisi wokugqibela okanye kwishishini. Ndifuna ukuba sisicoci solwazi, phakathi kwakho, isikhokelo sakho.
Ndiqhuba njani? Musa ukuyeka ukugxeka… Ndinamakhulu ambalwa abantu abatyelela isiza yonke imihla, kodwa bambalwa kakhulu abaphawuleyo. Iipesenti ezingama-20 + zakho zibuya ziphindaphindwe. Ndenza ntoni kakuhle? Ndinomdla! Kwakhona, ndiyabona ukuba kuninzi ukutyelelwa okuvela ngaphandle kwe-US ndingathanda ukuva ingxelo yakho!
Nantsi ingcebiso entsha yabo banamava. Ngoku ndiza kuqinisekisa ukuba ndibeka iingcebiso nakweyiphi na i-acronyms emnandi engenakuqondwa ngabantu abatsha. IIMHO, Olu luphawu oluhle loyilo lwewebhusayithi. Ayisiyo ikhonkco, kodwa ibonelela ngeenkcukacha ezithe kratya ukuba umsebenzisi akaqondi ukuba isichazi okanye ibinzana lithetha ntoni ngokuzibeka nje ngaphezulu.
Nantsi indlela eyenziweyo (uhlaziye umbulelo kwincam yomfundi kwi Isalathiso Ithegi):
Unokwenza oku nge ispan tag usebenzisa i isihloko Lento:
Ndiqinisekile ukuba ndingaphosa iqhosha lomhleli elitsha okanye iklasi kwiWordPress ukuze ndiyiphathe… mhlawumbi ngenye imini kungekudala!
Enkosi kwakhona ngokufunda! Khumbula ukuba sonke saqala kwenye indawo! Fundisa abafundi bakho.
tags: Isalathisoisifinyezo tagukufundisa abafundiukuhambahover isicatshulwaimouseoverithegi yobubanziisihloko sethuba
Ithegi yebhlog: Iimfihlo ezi-5 malunga nam
Ngomhla wama-11 ku-Disemba 2006 ngo-12: 44 AM
Ndicinga ukuba ibhlog yakho intle. Ndikhe ndajikeleza amaxesha ambalwa ukukufundela izithuba ke ndicinga ukuba wenza into elungileyo. Ukuba, ngapha koko, unabafundi ababuyayo ngaphezulu… awuphumelelanga?
Qhubeleka nomsebenzi omhle.
Ngomhla wama-11 ku-Disemba 2006 ngo-5: 52 AM
sebenzisa ithegi yesivakalisi koku.
I-inline styling yeyona nto imbi onokuyenza, kuba ukuba ufuna ukuguqula isitayile sakho se-akron (ufuna ukutshintsha ukusuka kumda odibeneyo ukuya kumgca onamachaphaza umzekelo) kuya kufuneka utshintshe onke amagama.
Ukwenza isitayile sethegi efayilini yakho kulula.
enye into: abafundi abafunda kwiscreen seemfama baya kusebenza ngcono kakhulu kwindawo yakho, ukuba usebenzisa ithegi efanelekileyo ye-xhtml efanelekileyo.
Ngomhla wama-11 ku-Disemba 2006 ngo-10: 18 AM
Enkosi kakhulu! Kuya kufuneka ndenze iposti malunga nokubhloga ngempumelelo ngenye imini kungekudala. Ngokuqinisekileyo andiyilinganisi ngezibalo kunye nengeniso. Imalunga nezimvo ezintle ezifana nezakho.
Ngomhla wama-11 ku-Disemba 2006 ngo-10: 19 AM
Enkosi ngaloo nto! Ndakhe ndafunda malunga negama lesichazi kwixa elidlulileyo kodwa bendilumke kancinci malunga nokuyisebenzisa. Nangona kunjalo, kuba kubonakala ngathi iyahambelana ne-XHTML kunye nomgangatho… ndiza kuyidubula.
Ngomhla wama-11 ku-Disemba 2006 ngo-10: 27 AM
Ukuhlaziywa kwithegi yesivakalisi enkosi!